Minecraft အရေခွံများကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း Androidsis ပါ
အခမဲ့ Minecraft အရေခွံများကို download လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
အ minecraft အရေခွံ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။ အခြား video games များနှင့်မတူဘဲ Minecraft ၌ငါတို့သည်၎င်းတို့အားအခမဲ့ download လုပ်ပြီး Android, PC သို့မဟုတ် console များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်း၌၎င်းတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
အရေခွံများနှင့်အတူ minecraft အတွက် mods များ့ဤ Microsoft ခေါင်းစဉ်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုတွင်စက်ပြင်အသစ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်များကိုထည့်သွင်း။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီမွမ်းမံထားသောအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည် YouTube နှင့် Twitch နှစ်ခုလုံးတွင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Minecraft Pocket Edition အတွက်ထိပ်တန်း mods ၁၀ ခု
သငျသညျလိုလျှင် Ironman, Superman, Batman, Daffy Duck, Gooffy, Wonder Woman, Hulk, Thor တို့၏အသားအရေကိုသုံးပါ။Minecraft ၌သင်စိတ်ကူးယဉ်သောသို့မဟုတ်အခြားဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုသင်ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုံး ၀ အခမဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
1 Minecraft အတွက်အရေခွံအခမဲ့ download လုပ်နည်း
1.2 Play Store မှ
1.2.1 Mods - Minecraft PE အတွက် AddOns
1.2.2 Minecraft PE အတွက် Block Master
1.2.3 Minecraft PE အတွက်အသားအရေ
2 Minecraft Pocket Edition တွင်အရေခွံများထည့်သွင်းနည်း
Minecraft အတွက်အရေခွံအခမဲ့ download လုပ်နည်း
Android အတွက် Minecraft ကဂိမ်းကိုအခမဲ့ကစားခွင့်ပေးသည်
Play Store မှာငါတို့အရေခွံတွေကို Minecraft Pocket Edition မှာအခမဲ့ download လုပ်ပြီး install လုပ်ခွင့်ပြုတဲ့ application တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲ။ အများစုကငါတို့ကိုအတူတူကမ်းလှမ်းတယ်မရ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်မည်သည့် filter အမျိုးအစားကိုမဆိုထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးကိုရှာခြင်းသည်ပင်ပန်းသောအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အမြန်စွန့်လွှတ်လိမ့်မည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Minecraft Pocket Edition သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရေခွံများကိုအင်တာနက်မှ download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်များတွင်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းပါ။
web ပေါ်မှာ TheSkindexငါတို့မှာအရေခွံအမြောက်အများရှိတယ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ရုပ်ပြ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ သမိုင်းဇာတ်ကောင်အရေခွံ…ငါတို့သည်ဤအရေခွံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင်ပုံသဏ္downloadန်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောအဆင့်များအတိုင်း၎င်းတို့အား Minecraft PE ၏မိတ္တူ၌ထည့်သွင်းပါ။
The NameMC ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Minecraft Pocket Edition အတွက်အရေခွံများစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ငါတို့သည်အရေခွံများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ themes အမျိုးမျိုး၏အရေခွံ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ download လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ငါရှင်းပြသောအဆင့်များအတိုင်း Minecraft PE ၏မိတ္တူ၌ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Play Store မှ
Mods - Minecraft PE အတွက် AddOns
Mods - Minecraft PE application အတွက် AddOns များကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရရှိစေသည် အရေခွံ ၁၀၀၀ ကျော် ငါတို့ကအရမ်းတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာမနေဘူးဆိုရင်ငါတို့ရှာနေတဲ့အသားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်အပြင်၌၎င်းသည် texture pack များ၊ ပရိဘောဂပုံစံများ၊ ယာဉ်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များကိုပေးသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အခမဲ့ download လုပ်ပါကြော်ငြာများနှင့်အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ Mods - Minecraft PE အတွက် AddOns သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင်ကြယ် ၄.၄ အဆင့်ရှိသည်။
Minecraft PE အတွက် Mods AddOns
Minecraft PE အတွက် Block Master
မင်းစိတ် ၀ င်စားစရာအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကမင်း Minecraft ရဲ့စစ်ဆင်ရေးနဲ့ဗေဒကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ mods တွေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Block Master ဆိုတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သုံးသပ်ချက် ၆၅၀,၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုတွင်ကြယ် ၄.၆ ပွင့်.
ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရရှိစေသည် အရေခွံအရေအတွက်များပြားသည် (ယခင်အပလီကေးရှင်းထက်နည်းသည်)၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ တည်ဆောက်မှုများ၊ တည်ဆောက်ပုံများ၊ ပျံသန်းခြင်းနှင့်မြေပြင်ယာဉ်များ၊ ပရိဘောဂများ၊ မိစ္ဆာများထည့်ရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သော mods များပါ ၀ င်သည်။
ရေးသားသူ: Lyxoto စတူဒီယို
Minecraft PE အတွက်အသားအရေ
Minecrafat PE အတွက်အရေခွံသည်တစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုမှမပါဘဲလုံးဝအခမဲ့လျှောက်လွှာ in-app တွင်သာမကအရေခွံမျိုးစုံ၊ ငါတို့အရေခွံမျိုးစုံကိုငါတို့ကိုပေးသောကြော်ငြာများပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ Minecraft Pocket Edition တွင် ၂ ချက်ပုတ်ရုံဖြင့်တိုက်ရိုက် install လုပ်နိုင်သည်။
ဒီ app မှာ v တစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ချေ ၅ ခုရှိကြယ် ၄.၅ လုံး၏ပျမ်းမျှအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပေါင်း ၉၀၀၀၀ နီးပါးကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်
ရေးသားသူ: Remoro စတူဒီယို
Minecraft PE အတွက်အရေခွံများကိုအခမဲ့ download ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအပလီကေးရှင်းသည် World of Skins၊ ကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေခွံ ၁၀၀၀ ကျော်လိင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စစ်ထုတ်နိုင်သောအရေခွံများ ဤအပလီကေးရှင်းတွင်ကြော်ငြာများပါ ၀ င်သည်၊ အကဲဖြတ်သူ ၂၀၀၀၀၀ ကျော်ရရှိပြီးဖြစ်နိုင်သော ၅ မှတ်တွင်ကြယ် ၄.၆ ရှိသည်။
Minecraft Pocket Edition တွင်အရေခွံများထည့်သွင်းနည်း
ငါတို့အရေခွံကို Play Store ကနေဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမျှပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ အရေခွံများတပ်ဆင်ရန်၊ ၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောအပလီကေးရှင်းကိုသင်ဖွင့်သောအခါ၎င်းတို့ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ Dress အမည်အောက်ရှိ home screen တွင်ပြထားသောခလုတ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီရိုကို ၀ င်ရောက်ရန်လိုပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအသားအရေကိုရွေးချယ်ပါ။
ငါတို့ဒေါင်းပြီးပြီ အရေခွံကိုပုံသဏ္ဌာန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Minecraft Pocket Edition အတွက် Android အတွက်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်အင်တာနက်မှကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါအသေးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ငါတို့ထည့်သွင်းထားသောအရေခွံအချို့ကိုအောက်တွင်ပြလိမ့်မည်။ အရေခွံအသစ်များထည့်ရန်နှိပ်ပါ ဇာတ်ကောင်ကိုတည်းဖြတ်ပါ.
ထို့နောက် Minecraft Pocket Edition တွင်ထည့်သွင်းထားသောအရေအားလုံးပြသသည့်ဒုတိယ tab သို့သွားပါ။ ကိုနှိပ်ပါ မင်းရဲ့ဥစ္စာ နောက်ပိုင်းတွင် တင်သွင်းဖို့.
ခလုတ်အသစ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် အသွင်သစ်ကိုရွေးချယ်ပါ ပြီးတော့ငါတို့နှိပ်ရမယ့်နေရာ
Select new ရှုထောင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ အပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သွားလိုသည့်ပုံစာကြည့်တိုက်သို့သုံးရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောပုံအတိုင်းအသားအရေကိုရွေးပါ.
ထိုအခါ ပုံ၏ preview ကိုပြလိမ့်မည်မရ။ ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောပုံပေါ် မူတည်၍ တူညီသောပုံတစ်ပုံ (သို့) နှစ်ခုကိုပြသနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ငါတို့နှစ်ခုကိုဘယ်ဟာကိုရွေးသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။
ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်လျှင်လျှောက်လွှာ n၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောအသားအရေကိုပြလိမ့်မည်မြေပုံအသစ်များနှင့်ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သောမြေပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သောအရေပြား
အရေပြားကိုသတိပြုပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်သာရရှိလိမ့်မည် ၎င်းကိုအခြားကိရိယာများနှင့်ထပ်တူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကစားရန် Android device တစ်ခုထက်ပိုသုံးလျှင်၎င်းတို့အားလုံးကိုဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်လည်းထို option ကိုအသက်သွင်းခဲ့လျှင် ယုံကြည်မှု၏ကဏ္aspectsများကိုသာခွင့်ပြုပါငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကငါတို့မမြင်ဖူးတဲ့အတိုင်းဒီအရေခွံတွေနဲ့ငါတို့ကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » အခမဲ့ Minecraft အရေခွံများကို download လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
Android အတွက်ပထဝီဝင်ကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ် ၅ ခုနှင့်ဂိမ်းများ